Muuri News Network » DAAWO: Waxgaradka: K/Galbeed oo shir ku soo gaba gabeeyay Baydhabo.
DAAWO: Waxgaradka: K/Galbeed oo shir ku soo gaba gabeeyay Baydhabo.
Shirkii wada tashiga iyo wacyi gelinta arrimaha Dastuurka ee saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ka socday magaalada Baydhabo ayaa maanta la soo gaba gabeeyay, iyadoo intii uu shirkaas socday lagu soo bandhigay arrimo badan oo ku saabsan hanaanka dib u eegista Dastuurka.
Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo shirkan soo qaban qaabisay ayaa waxay kulamo gaar gaar ahaa u qabatay qeybaha bulshada Maamulka Koofur Galbeed, Xildhibaanada heer federaal iyo heer maamul goboleed, siyaasiyiinta, Culumaa’udiinka haweenka, odayaasha dhaqanka, iyo dhalinyarada.
Kulamadan ayaa isugu jiray kuwo talo wadaag iyo xog uruurin lala sameeyay qeybaha kala duwan ee bulshada Dowlada Koofur galbeed.
Waxaa xeritaanka shirka khudbado ka jeediyay Mas’uuliyiin ka socday dowladda Federaalka iyo maamul goboleedka Koofur Galbeed, waxaana ay ka hadleen muhiimada uu lahaa shirkan iyo xilliga lagu soo beegay.